I-Exynos entsha ye-Samsung iya kuboniswa ngoNovemba 14 | I-Androidsis
Isamsung ineveki egcwele iindaba. Inkampani ibonisiwe, phakathi, Ifowuni yakho oyifumene ngokusemthethweni. Ayizizo zodwa iindaba zokuba inkampani yaseKorea isishiyile kule veki. Kuba sele iqinisekisiwe ukuba iphakathi kuluhlu lweefowuni oluya kubakho isivamvo somnwe esikrinini.
Kwaye ngoku kukujika kweprosesa entsha ye-Samsung. Njengokuba usazi, Inkampani yaseKorea ivelisa iiprosesa zayo, uluhlu lwe-Exynos. Kwaye kungekudala siya kuba nakho ukudibana nomprosesa wakho omtsha. Sele bawubhengezile umhla wokubhengezwa okufanayo ngokusesikweni, njengoko ubona emfanekisweni.
Iya kuba nge-14 kaNovemba, ngoLwesithathu olandelayo, xa le ntetho isenzeka. Iprosesa esele iza nobukrelekrele bokuzenzela, njengoko uphawu lubhengezile. Kubonakala ngathi iyakuba yenye yeempawu eziphambili kwiprosesa. Okwangoku asilazi igama eliza kuba nalo.
Into esiyaziyo kukuba iya kuba yiprosesa yakho entsha. Ke sinokulindela ukusebenza okumangalisayo kuyo. Kwezi ntlobo zemiba Samsung luphawu oluhlangabezana ngokugqibeleleyo. Ukongeza kubukho, sele iphantse inyanzelekile, yobukrelekrele bokufakelwa kuyo.
Kucingelwa ukuba le processor iza kuba nayo inkxaso ye-5G, ukwenzela ukuba isiphelo esiphezulu se-Samsung esiyisebenzisayo, esiza kufika kunyaka olandelayo, siya kuba sele sihambelana nale teknoloji. Kubonakala ngathi i-Galaxy S10 iya kuba yimodeli yokuqala yokuba nayo, okanye ifowuni esongelayo yohlobo.
Akuthandabuzeki Kuya kuba ngumdla ukubona ukuba i-Samsung isilungiselele ntoni ngale processor intsha ye-Exynos. Ifemu yaseKorea yaziwa ngokuba ziiprosesa ezisemgangathweni. Kwaye siza kubona ukuba zeziphi izinto ezintsha ezizisiweyo, ukugcina inqanaba elisetyenzisiweyo kule ndima.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » Iprosesa entsha yeSamsung sele inomhla wentetho